သငျသညျ WINDOWS 10 ကို INSTALL လုပ်သည့်အခါ 0X80070570 အမှား - WINDOWS ကို - 2019
သငျသညျ Windows 10 ကို install လုပ်သည့်အခါမှားယွင်းနေသည်ဖြေရှင်းချက်ကုဒ် 0x80070570
က Android platform ပေါ်တွင်မဆိုစက်ကိုသုံးတဲ့အခါအသုံးပြုသူများထံမှမေးခွန်းတွေနိမ့်ဆုံးစေကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာ Windows နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အားဖြင့်များစွာကွဲပြားခြားနားသည် hidden setting များကိုအပြည့်အဝသင်၏စမတ်ဖုန်းများ၏အလားအလာတိုက်ဖျက်မည်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့အသံအတိုးအကျယ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အင်ဂျင်နီယာ menu ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာ menu ကတဆင့်အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိ
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ငါတို့နှစ်ဦးကိုခြေလှမ်းများထွက်သယ်ဆောင်မည်, အင်ဂျင်နီယာ menu ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အထူးအပိုင်းအတွက်အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောက Android-device များပေါ်တွင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အချို့သောခြေလှမ်းများကွဲပြားခြားနားဖြစ်စေခြင်းငှါ, ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အလားတူလမ်းအတွက်အသံ configure ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်အာမခံလို့မရပါဘူး။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: Android ပေါ်မှာ volume ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို
အဆင့် 1: ဖွင့်လှစ်အင်ဂျင်နီယာ menu ကို
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများ၏မော်ဒယ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိအင်ဂျင်နီယာ menu က Perform ။ ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်တိုးချဲ့သိရှိလိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေး link ကိုပေါ်မှာငါတို့ဆောင်းပါးတွေထဲကတစ်ခုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်တပ်မက်လိုချင်သောအပိုင်းကိုဖွင့ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းခေါ်ဆိုရန်ဖုန်းနံပါတ်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည့်အထူး command ကို၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။
Read more: သငျသညျ Android အတွက်အင်ဂျင်နီယာများ၏ menu ကိုဖွင့်လှစ်ဘယ်လို
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာပေမယ့်အချို့ကိစ္စများအတွက်ပိုမိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, သင်ကတက်ဘလက်ရှိအထူးသဖြင့်လျှင်, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်အဆင်ပြေအောင်ဘဲ, Third-party application များ install လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အများဆုံးအဆင်ပြေရွေးချယ်စရာ MobileUncle Tools များနှင့် MTK အင်ဂျင်နီယာ Mode ကိုဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး applications များဟာအင်ဂျင်နီယာ menu ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးသောအရပ်အနည်းဆုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပေး။
MTK အင်ဂျင်နီယာ Mode ကို Google Play စတိုးကနေဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
အဆင့် 2: volume ကို Adjust
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများနှင့်ပွင့်လင်းအင်ဂျင်နီယာ menu ကို၏ခြေလှမ်းများပြီးသွားချိန်သင့်ရဲ့ device ပေါ်တွင်အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်ကိုထိန်းညှိဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်အချို့သောကန့်သတ်ချိုးဖောက်နေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောများထက်မဆို setting များကိုအခြားမလိုလားအပ်သောပြောင်းလဲမှုကိုအထူးဂရုပြု။ ဒါကဖုန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ပြည့်စုံပျက်ကွက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
အထက် tabs များနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာ menu ကိုဝင်ရောက်ပြီးနောက်ကိုသွား "ဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်း" နှင့်အပိုင်းကို click "အသံ"။ အဆိုပါ interface ကို၏အသွင်အပြင်မှတ်ချက်နှင့်ပစ္စည်းများကို၏နာမတော်ကိုဖုန်းမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မည်။
ထိုအခါသင်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်စတင်ပီ၏စစ်ဆင်ရေး၏ Modes သာတစ်ဦးကိုရွေးပါနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိမှုများကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အောက်ကပျောက်ဆုံးကဏ္ဍများကိုမစစ်ကြောဘဲနေသင့်တယ်။
"ပုံမှန် Mode ကို" - ပုံမှန်လည်ပတ်;
"နားကြပ် Mode ကို" - ပြင်ပအသံ device များအတွက် Mode ကို;
"အသံချဲ့စက် Mode ကို" - mode ကိုရသောအခါသင်လော်စပီကာကိုသက်ဝင်;
"Headset_LoudSpeaker Mode ကို" - တူညီတဲ့ပီပေမယ့်နားကြပ်နဲ့ချိတ်ဆက်လျက်ရှိ၏
"မိန့်ခွန်းစွမ်းရည်မြှင့်" - ဖုန်းခေါ်စဉ်အတွင်း mode ကို။
တင်ပြရှေးခယျြစရာတစျခုရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုပုံကိုသွား "Audio_ModeSetting"။ မျဉ်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "အမျိုးအစား" ပေါ်လာမည့်စာရင်းထဲမှာ, Modes သာတစ်ဦးကိုရွေးပါ။
"SIP" - အင်တာနက်ပေါ်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု;
"SPH" နှင့် "Sph2" - မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းပီ;
"မီဒီယာ" - မီဒီယာပြန်ဖွင်၏အသံအတိုးအကျယ်,
"လက်စွပ်" - အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအသံအတိုးအကျယ်,
"FMR" - ရေဒီယိုပြန်ဖွင့်အသံအတိုးအကျယ်။
ထိုအခါသင် Section မှာပမာဏအကွာအဝေးကို select ရန်လိုအပ်ပါတယ် "အဆင့်"အသံထိန်းချုပ်မှုကိရိယာပေါ်တစ်ဦးစံတို့က activated သောအခါ, လာမယ့်ခြေလှမ်းတစ်အချို့သောအဆင့်သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်။ အများဆုံး (6) မှအသံတိတ်ခုနစ်အဆင့်ဆင့် (0) ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း။
တစ်ဘလောက်အတွက်တန်ဖိုးပြောင်းလဲပစ်ရန်နောက်ဆုံးတွင်လိုအပ်သော "Value ကို 0-255 ဖြစ်ပါတယ်"0င်နှင့်အတူ, သင့်အဆင်ပြေမှာပါ - မပါအသံများနှင့် 255 - အများဆုံးပါဝါ။ သို့သော်အများဆုံးခွင့်ပြုသည့်တန်ဖိုးကိုရှိနေသော်လည်းပိုကောင်းခလောက်ရှောင်ရှားဖို့ပိုပြီးကျိုးနွံနံပါတ်များကို (240) ဖြစ်စေအကျဉ်းချထား။
မှတ်ချက်: အသံအတိုးအကျယ်အကွာအဝေး၏အချို့အမျိုးအစားများကိုအထက်ပါဖော်ပြထားထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်သောအခါဤစဉ်းစားရပါမည်။
စာနယ်ဇင်းများ "Set" တူညီတဲ့လုပ်ကွက်အတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးနိုင်ပါသည်လျှောက်ထားရန်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အသံနဲ့တရားဝင်တန်ဖိုးရှိသမျှသည်အခြားသောကဏ္ဍများအတွက်အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာအတူလိုက်လျော။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, "မက်စ် Vol 0-172" သင်က default အနေနဲ့စွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက် Android ကို-Device ရဲ့အထူးသဖြင့် mode ကို၏ activation ပေါ်မှာအင်ဂျင်နီယာ menu ကနေတဆင့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုးမြှင့်များ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်များနှင့်တည်းဖြတ်ဖို့ parameters များကိုသာအမည်များကိုလိုက်နာရန်, သင်ပီ၏လုပျငနျးကိုခိုင်ခံ့ရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်အထက်တွင်ကန့်သတ်ပေးထားခြင်း, အသံအတိုးအကျယ်က၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝအပေါ်နီးပါးမျှသက်ရောက်မှုဖြည့်စွက်။
ဗီဒီယို Watch: Top 10 OneDrive for Business Tips and Tricks (စက်တင်ဘာလ 2019).